ဆရာမရဲ့လိုးပါဆက်လိုးပါ💏 (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
ဆရာမ စောက်ပတ်ထဲ လီးဒစ်ဝင်သွားပြီနော်…၊ ဒူးနှစ်ဖက်ပေါ် လက်ထောက်ပြီး အသာကုန်းပေးပါ..၊ ဒါမှ နောက်က လီးအကုန်ဝင်အောင် ထိုးသွင်းပြီး ကောင်းကောင်း ဆောင့်လိုးလို့ ရမှာ…” “ အရမ်းကြီး ထိုးမသွင်းပါနဲ့အုံး ရှင်…ကြပ်နေတာ…၊ ဖြည်းဖြည်း ပဲ သွင်းပါအုံး ရှင့်..” ကုန်းပေးပြီးနောက် ခေါင်းလေးကို နောက်သို့ လှည့်ကာ လှမ်းပြောသည်..။ စိုးခိုင်ကလည်း ခေါင်းငဲ့လာတာ အလိုက်သင့်ဖြစ်သွား၍ ဆရာမလေး၏ နှုတ်ခမ်းကို တစ်ချက်လှမ်းဆွဲစုပ်လိုက်ရာ ပွတ်ကနဲ အသံမြည်သည်..။ “ ဟင့်….ကြည့်ပါလား…တကယ်ပါပဲ…” “ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာမရဲ့..ဟဲဟဲ ဟဲ…” “ သွားပါ….လူကို နမ်းလား စုပ်လားနဲ့…” “ အော်…ဆရာမရယ်… စောက်ပတ်ထဲ လီးဒစ်တောင် သွင်းထားပြီပဲ…၊ ပါးစပ်စုပ်တာ နမ်းတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ..၊ ခေါင်း နောက်လှည့်ပေးစမ်းပါအုန်း..” “ အို…ဟင့်….ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲ…” “ ဆရာမရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းချင်လို့…ပေါ့…” “ ဟာ….သွား …. မနမ်းနဲ့..” “ ဆရာမကလဲ ဗျာ… အလိုးတော့ခံနေပြီး အနမ်းကျမှ နှမြောတွန့်တိုနေတယ်…” “ ဟာ…အဲ့လိုတွေ မပြောနဲ့…” “ စောက်ပတ်ထဲ လီးထပ်ထိုးသွင်းမယ် နော်…” ဆရာမလေးက ဘာမှမပြောတော့..။ ခါးညွှတ်ကာ ဖင်ကြီးကို နောက်ကော့ပေးသည်..။
ပါးစပ်က မပြောသော်လည်း လီးသွင်းရန် အလိုက်သင့် နေပေးထားရာ ဆက်ထိုးသွင်းဖို့ ပြောသည်နှင့် မခြားပါ..။ စိုးခိုင်က စုံကိုင်ဆွဲထားသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ပို၍ တင်းတင်း ဆွဲညှစ်သည်.။ ဖင်ပြောင်ကြီးကို မသိမသာ ဝိုက်၍လှုပ်ပေးရာ စောက်ပတ်ထဲဝင်နေသော လီးဒစ်ကြီးနှင့် စောက်ခေါင်းဝကို ထိုးမွှေလှည့်သလို ဖြစ်လျက် ဆရာမလေး တုန်ခါတွန့်လှုပ်သွားသည်.။ “ ကျွတ်…ကွာ…ကုန်းဆိုလို့ ကုန်းပေးထားပြီပဲဟာ….လုပ်ပေါ့လို့…” “ ဆရာမ စောက်ပတ်က အတော်ကျဉ်းတယ်..လီးဆက်သွင်းလို့ နာရင် တအားမအော်နဲ့ နော်..၊ ဟိုအခန်းထဲက ကြားကုန်အုန်းမယ်..” “ ဟာ…အရမ်းနာမှာလား…” “ ကောင်းလည်း ကောင်းမှာပါ..၊ ဆရာမလည်း အသိသားနဲ့…” “ အို….ကျမက ဘာကို သိရမှာလဲ…လို့…” “ စောက်ပတ်ထဲ လီးထိုးသွင်းတာ အရမ်းခံလို့ကောင်းတယ် ဆိုတာကိုလေ…” “ ဟွန့်…ကျွတ်…သွားစမ်းပါ…၊ အဲဒါကို ကျမက ဘယ်လိုလုပ်သိရမှာလဲ…” “ ဆရာမ အရင်က အလိုးခံဖူးတယ် မဟုတ်လား…” “ ဟာ….ဘာတွေ လာပြောနေမှန်း မသိဘူး..၊ ကဲ…လုပ်မှာလား မလုပ်ရင်လဲ ဖယ်တော့…တကယ်ပဲ…လူကို စိမ်ပြေနပြေနဲ့ လုပ်နေတာ.. သူ့မယားကျနေတာပဲ..” “ ဟဲဟဲ….လိုးမယ်…လိုးမယ်…ကဲ….သွင်းပြီ…” အိုင်ရင်း၏ ဘယ်ဖက်ဖင်လုံး တစ်တစ်ကြီးကို အားမနာတမ်း ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖိထိုးသွင်းချလိုက်လေတော့သည်..။
“ ဗြစ်….ဘုဘု……ဘွပ်…အားပါးပါး…နာတယ်…ဖြည်းဖြည်း…..ဘုဘု ဘွပ်…ဘွပ်….အား ကျွတ်ကျွတ်….အမလေးလေး…” လီးကြီးသည် ဆရာမလေး၏ ကျဉ်းကြပ်သော စောက်ခေါင်းပေါက်လေးထဲသို့ တစ်၍တစ်၍ တိုးဝင်သည်..။ အိုင်ရင်းမှာ လီးအစစ်နှင့် မဟုတ်သော်လည်း ရာဘာလီးအတု စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းတာခံဖူးပြီး၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ခရမ်းသီးကဲ့သို့သော ရှည်မျောမျော အရာများကို အသုံးပြုကာ အဖုတ်ကို ထိုးကလိ အာသာဖြေနေသော မိန်းကလေးမို့ စောက်ပတ်က လီးဝင်လမ်းဖြောင့်အောင် အလိုလို လုပ်ပေးတတ်နေသည်..။ လီးကြီးသည် စောက်ပတ်လေးထဲသို့ အဆုံးပင် ဝင်သွားလေတော့သည်..။ လီးဝင်အောင် ထိုးသွင်းပြီးနောက် စိုးခိုင်က ဆွဲထုတ်ပြန်သွင်းနှင့် လိုးပါလေတော့သည်..။ လိုးရင်းလည်း အိပ်ခန်းထဲသို့ လှမ်းကြည့်သည်..။ အိုင်ရင်းကလည်း အလိုးခံရင်း လှမ်းကြည့်မိသည်..။ ပန်းအိဖြူတို့ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတော့ အပြတ်ကို ကဲနေကြသည်..။ အိပ်ခန်းဝတွင် စုံတွဲတစ်တွဲ လိုးနေဆော်နေကြသည်ကို လုံးလုံး မသိကြ..။ ကာမယမ်းအိုး ပေါက်ကွဲကာ အပီကို ပွတ်နေကြသည်..။
“ ဖတ်ဖတ်….ပျစ်ပျစ်…..ဖတ်..ဖွတ်…ဖု .ဖု…ဖတ်…” “ အားပါးပါး…ကောင်းလိုက်တာ တီချယ်ရယ်…၊ ပွတ်စမ်းပါရှင့်… အမလေးနော်… သမီးနို့ကိုလည်း ဆွဲအုန်းလေ…၊ တီချယ်ရဲ့.. အားအား…ကောင်းတယ်… ကောင်းတယ် အမလေး ထိတယ်…အဲလိုမျိုး ဖိဖိ ပွတ်ပေးစမ်းပါ ရှင့်…” “ ကော့လေ…ပန်းအိ… ဖင်ကြီး ကော့ကော့ပေး..၊ ဟုတ်ပြီ…တီချယ့်နို့ကြီးတွေကိုလည်း လှမ်းဆွဲလေ…၊ အ…အား…..တအားဆွဲစမ်းပါ…ကလေးရ…မင်းစောက်ပတ်ကို ဖိပွတ်ရတာ..ကောင်းလိုက်တာကွာ..” နောက်ဆုံးတွင်တော့ …. “ ပွတ်…ပွတ်…ဖိပွတ်ပစ်စမ်းပါ…တီချယ်ရဲ့…သမီးလာတော့မယ်…ထွက်တော့မယ်….တအားပွတ်… တီချယ်ပွတ်ပေးတာ သိပ်မိုက်တာပဲ…အား….ဟင့်…ဟင့်….ထွက်ပြီ…အိ….အီး…ရှီး…အား….အား…” ပန်းအိဖြူတစ်ယောက် တီ ဆားတို့ခံရသလို ကော့ပျံလန်ကာ ပြီးသွားသည်..။ စတယ်လာလည်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုသလိုပင် ပြီးရသည်..။ “ ဟာ…ဘာလို့ ထုတ်တာလဲ….လိုးပါရှင့်….ကျမကို ဆက်လိုးပါ…စောက်ပတ်ထဲ လီး ပြန်သွင်းပါ….” ပြီး တော့ရန် သိပ်မဝေးတော့ပဲ ကာမဆိပ်အပြည့် တက်လျက် အရမ်းကို နှာထနေလေသော အိုင်ရင်းမှာ စောက်ပတ်ထဲမှ လီးကြီး ဆွဲထုတ်သွားသည့်အတွက် ဆန့်တငံ့ငံ့ ကြီးဖြစ်သွားရသည်မို့ အငမ်းမရပင် အော်ဟစ်ပြောလိုက်မိသည်..။
ကာမအရသာ အပြည့်အဝ ခံစားရပြီးနောက် အနားယူသလို တစ်ယောက်နှင် တစ်ယောက် ဖက်ရင်း မှိန်းနေကြသည့် အိပ်ခန်းထဲမှ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်သည် ဆရာမလေး အိုင်ရင်း၏ အာသာငမ်းငမ်း ရမ္မက်ပြင်းပြင်း ပြောလိုက်သည့် စကားသံများကို အတိုင်းသားပင် ကြားလိုက်ကြသည်..။ ဆရာမလေးစတယ်လာနှင့် ပန်းအိဖြူတို့သည် အသံထွက်လာရာဆီသို့ ပြိုင်တူပင် လှမ်းကြည့်မိကြသည်..။ ထိုအချိန်မှာပင် စိုးခိုင်ကလည်း အိပ်ခန်းဝမှ အခန်းစည်းကို ညာလက်ဖြင့် သိမ်းကာ ဘေးသို့ တွန်းဖယ်လိုက်သည်..။ အခန်းစည်း ပွင့်သွားသဖြင့် စိုးခိုင်နှင့် ဆရာမလေး အိုင်ရင်းတို့ဖြစ်နေကြပုံကို အိပ်ခန်းထဲရှိ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်က ကောင်းကောင်းကြီးပင် လှမ်းမြင်လိုက်ကြရလေတော့သည်..။ စိုးခိုင်နှင့် ဆရာမလေး အိုင်ရင်းတို့ ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ကာ ဘယ်စခန်းဆိုက်ခဲ့ကြသည်ကို ဒက်ကနဲပင် သိသာနိုင်သည်..။ သို့လော သို့လောပင် သံသယပွားစရာ မလို..။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်မှာ မထင်မှတ်သော မြင်ကွင်းကြောင့် မျက်လုံးအဝိုင်းသား၊ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်ကုန်ကြသည်.။ စိုးခိုင်ေ၇ာက်လာမည်ကို ပန်းအိဖြူက သိထားသလို အိုင်းရင်းဝင်လာမည်ကိုလည်း စတယ်လာက သိထားသည်..။ သို့သော် အိုင်ရင်းနှင့် စိုးခိုင်တို့ လိုးဖြစ်ကြမည်ကိုတော့ သူတို့ လုံးဝမထင်..။ စိုးခိုင်ကို မြင်ရ၍ စတယ်လာအံသြသွားရသလို အိုင်ရင်းကို မြင်တွေ့ရ၍ ပန်းအိဖြူလည်း အံ့အားသင့်သွားရသည်..။
အိုင်ရင်းနှင့် စိုးခိုင်တို့ လိုးဖြစ်သွားကြပြီးဖြစ်ကြောင်းကို သိသွားကြတော့ ပန်းအိဖြူရော စတယ်လာပါ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားကုန်ကြသည်..။ ဆရာမလေး အိုင်ရင်းလည်း အံ့သြတုန်လှုပ်သည်.. ။ မိန်းကလေး သုံးယောက်စလုံး ကြက်သေသေ ကုန်ကြသည်..။ ဘာလုပ်၍ ဘာပြောရမှန်းကို မသိကြတော့..။ စိုးခိုင်ကတော့ ဘာလုပ်ရမည်ကို သိသည်..။ ငနဲသားသည် ဘာမျှပြောမနေ..။ တုံ့ဆိုင်းနောက်တွန့်နေခြင်းလည်း မရှိ..။ အိပ်ခန်းထဲသို့ ခြေလှမ်းသွက်သွက်နှင့် လျှောက်လှမ်းဝင်သွားသည်..။ အိုင်ရင်းကို လိုးနေရာမှ ဆွဲထုတ်ထားသော လီးကြီးသည် အသကုန်မတ်ထောင်ကာ တငေါ့ငေါ့ လှုပ်ခါရမ်း၍ နေသည်..။ ဆရာမလေး အိုင်ရင်းမှာလည်း အလိုးခံနေရင်းတန်းလန်း ဆွဲထုတ်သွားသည့်အတွက် ဒူနှစ်ဖက်ပေါ် လက်ထောက်ကာ ခပ်ကိုင်းကိုင်း ကုန်လျှက်သားရှိနေရာမှ အသာမတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်..။ အိပ်ခန်းထဲ ခုတင်ထက်မှ ဆရာမလေး စတယ်လာသည် အားကနဲ အိုးကနဲ ရေရွတ်ကာ ဆွဲမိဆွဲရာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးဆွဲယူကာ ရင်တွင်ဖိကပ်ပိုက်သည်..။ ယောက်ျားသားကြီးတစ်ယောက်ရှေ့မှောက်တွင် ကိုယ်ဝတ်အကျွတ်ကျွတ် အလွတ်လွတ်ဖြင့် ဗလာကိုယ်လုံးတီး ၊ ဖင်ကြီးအပြောင်သား၊ နို့ကြီးအဖွေးသား၊ စောက်ပတ်ကြီး အပြူးသား ရှိနေရမှုကြောင့် ကမန်းကတန်း လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လိုက်ခြင်းပါ..။ ပန်းအိဖြူတစ်ယောက်သာ အေးအေးဆေးဆေး ရှိနေသည်..။
စိုးခိုင် ဘယ်လို စခန်းဆက်သွားမည်ကို ကောင်မလေးက ရိပ်မိနေပြီကိုး…။ မူလစီစဉ်ထားသည်ထက်၊ တစ်ယောက်ပိုကာ ဆရာမလေး အိုင်ရင်းပါ အတူပါဝင်လာမည်မို့လည်း ချာတိတ်မလေး ပိုသဘောကျနေလေသည်..။ ခေါင်းအုန်းကြီး ရင်တွင်ပိုက်လိုက်သောကြောင့် စတယ်လာ၏ ရင်ဘတ်နှင့် ပေါင်ကြားတို့ကတော့ အကာအကွယ် ဖြစ်သွားရသည်..။ တင်ပါးဆုံမို့မို့တစ်တစ်ကြီးနှင့် ပေါင်တန်တုတ်တုတ်ဖြိုးဖြိုးတွေကတော့ အထင်းသား အရှင်းသား ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်လို ရှိနေသော စိုးခိုင်ကတော့ စတယ်လာ၏ ဖင်ကြီးပြောင်ဝင်းနေသည်ကို မမြင်နိုင်သေး..။ ပေါင်တန်ကြီးတွေ အဖွေးသား ရှိနေသည်ကိုတော့ မြင်နေရသည်..။ စိုးခိုင်က ခုတင်ရှိရာသို့ တန်းတန်းမတ်မတ်ပင် သွားသည်..။ ဆရာမလေး စတယ်လာသည် မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် ဖြင့် စိုးခိုင်ကို ကြောင်ကြည့်နေသည်..။ စိုးခိုင် ခုတင်ပေါ်တက်သည်..။ ပြီးတော့ စတယ်လာကို လူရော ခေါင်းအုန်းပါ တစ်ခါတည်း ဆွဲပေ့ဖက်လိုက်သည်..။
စိုးခိုင်သည် သည်နေရာတွင် ရှိနေသော မိန်းကလေး သုံးယောက်တွင် ပန်းအိဖြူက သူလိုးနေသည့် မိန်းကလေး ၊ ပိုင်ပြီးသား..။ ဆရာမလေး အိုင်ရင်းကလည်း စောစောလေးကပဲ လိုးခဲ့ပြီးသူ..။ ပိုင်နေပြီဟု ဆိုနိုင်သည်..။ မပိုင်သေးတာက ဆရာမလေး စတယ်လာသာ ရှိသည်..။ ဒါကြောင့် ဆရာမလေး စတယ်လာကိုလည်း အပိုင်ကိုင်နိုင်ရန် စိုးခိုင်က လက်မြန်ခြေမြန် လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။ ဆရာမလေး စတယ်လာ နှာကြီးကြောင်းကိုတော့ အပြတ်ပင် သိပြီးပါပြီ..။ ထကြွနေသော ရမ္မက်ဇောတို့လည်း တငွေ့ငွေ့ ရှိနေသေးသည်ကိုလည်း နားလည်သည်..။ အပိုင်ကိုင်ရဖို့ ဘာမှ မခက်..။ ရဲရဲနှင့် ခပ်ကဲကဲ လုပ်ဖို့သာ လိုသည်..။ ပွေ့ထူ၍ ပါလာသော ဆရာမလေးစတယ်လာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆွဲလှည့်၍ မွေ့ရာပေါ် မှောက်လျက်ဖြစ်အောင် တွန်းလှဲချသည်..။ “ အို…အို….ဟင့်….ဘာလုပ်မလို့လဲ…ဖယ်ဖယ်….လက်ကိုလွှတ်ပါ…မလုပ်ပါနဲ့ ရှင်… မလုပ်ပါနဲ့….ဟင့်ဟင့်…” ဆရာမလေး စတယ်လာမှာ အလန့်တကြား ရေရွတ်ငြင်းဆန်ရင်း စိုးခိုင်တွန်းချသည့်အတိုင်း လဲကျသည်..။ စိုးခိုင်လုပ်လိုက်ပုံကလည်း တကယ့်ကို အခြေအနေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချသည့် ပိုင်ကွက်..။ မှောက်ရက်ဖြစ်အောင် တွန်းချလိုက်ရာတွင် ဆရာမလေးမှာ ခေါင်းအုန်းကြီးရင်ခွင်ပိုက်ရက်နှင့် ဝမ်းလျားမှောက်လဲကျသွားလေရာ၊ ရင်ဘတ်နှင့် ဝမ်းဗိုက်အောက်တွင် ခေါင်းအုန်းခုထားသလို ဖြစ်သွားသည်..။
ဝမ်းလျားမှောက်ကျသွားသည်ဆိုသော်လည်း တကယ်တော့ ဒူးတုတ်ကာ ဝပ်ပေးသည့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေသည်..။ သည်ကြားထဲတွင် ဒူးနှစ်ဘက်ကလည်း ခေါင်းအုန်းဘေးတွင် ညှပ်ခွသလိုပြုမိပြန်ရာ ဖင်ကြီး ပိုထောင်တက်သည်..။ စိုးခိုင်ကလည်း ဆရာမလေး၏ ဖင်ကြီးနောက် အမြန်ဒူးထောက်ကပ်သည်..။ ပြီးတော့ သူ့လီးကြီးကို စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းထည့်လိုက်သည်.။ စတယ်လာက ဖင်ရမ်းပြီး ရုန်းကန်လေရာ စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းထည့်သော လီးကြီးက အပေါက်ချော်သွားသည်.။ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ မဝင်၊ ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်သွားလေသည်..။ စတယ်လာက ဖင်အကော့ စိုးခိုင်က ဖိဆောင့်ထိုးအသွင်း အံကိုက်ဆိုသလို တိုက်ဆိုင်သွားလေရာ လီးဒစ်သာမက တစ်ဝက်မရှိတရှိလောက်ပင် ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်သည်..။ ဖင်ဝနှင့် လီးချောင်းတို့တွင် ပေကျံနေသော ချွဲကျိကျိ စောက်၇ည်ကြည်တို့ကြောင့် လီးဝင်ချောသော်လည်း လီးနှင့် လိုးတာမဆိုထား၊ လက်သန်းလေးနှင့်ပင် ထိုးကလိဖူးခြင်း မရှိသည့် စအိုလေးမှာ ကျဉ်းလှပေရာ၊ လီးကြီးသည် ကြပ်သိပ်နေသည်..။ စတယ်လာမှာလည်း ဖင်ဝ ကျိန်းစပ်တစ်ဆို့လျှက် အရမ်းနာသည်..။ “ အား….နာတယ်…နာလိုက်တာ… မရဘူး….၊ သိပ်နာတာပဲ…သေပါပြီ…အား…အား ” တစ်ဝက်သာသာလောက်ဝင်နေသည်မို့ ထပ်ထိုးသွင်းသောအခါ လီးသည် နောက်ထပ် သုံးလက်မလောက် တစ်၍ ထပ်ဝင်သွားသည်..။ အပြင်တွင် နှစ်လက်မသာသာလောက်သာ ကျန်ပေတော့သည်..။
“ အား….အမလေး.. ရက်စက်လှချည်လား…၊ အဲဒါ..ဖင်ပေါက်ပါရှင့်…၊ ဖင်ထဲ ဝင်နေတယ်.. မလုပ်နဲ့ ပြန်ထုတ်ပါ…၊ နာတယ်…သိပ်နာတယ်…သေလိမ့်မယ်…၊ ပြန်ထုတ်ပါရှင်…အား…အား……” နာလွန်း၍ စတယ်လာ အော်ဟစ်မိသည်.။ အတင်းလည်း ရုန်းထွက်သည်..။ စိုးခိုင်က အလွတ်မပေး..။ မိန်းကလေး၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို လက်နှစ်ဘက်နှင့် စုံကိုင်ကာ အတင်းဖိထိန်းထားသည်..။ ခါးကို ကော့ကာ ဆက်၍ ထိုးသွင်းသည်..။ ဖင်ကွဲလုမတတ်ဖြစ်ရာ ပြင်းပြလှသော နာကျင်မှုကိုလည်း မချိမဆန့် ခံရသော စတယ်လာ ကုန်းအော်တော့သည်..။ ထွန့်ထွန့်လည်း လူးနေသည်..။ ဆရာမလေး စတယ်လာ၏ အော်လိုက်သံသည် စိုးခိုင်၊ ပန်းအိဖြူနှင့် အိုင်ရင်းတို့ကို အံ့သြသွားစေသည်..။ ယခု ဆရာမလေး စတယ်လာ စူးစူးဝါးဝါး အော်လေတော့မှပင် သူတို့သုံးယောက်လုံး ဖင်ထဲ လီးဝင်နေသည်ကို သိကုန်ကြသည်..။ စိုးခိုင်သည် ဆရာမလေး စတယ်လာကို ဖင်ချဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိသည်.။ သို့သော် အစပိုင်းတွင်တော့ မဟုတ်..။ စောက်ပတ်ကို အပီချကာ ယဉ်ပါးရင်းနှီးလာအောင် လုပ်ပြီးမှ ဖင်ကို အပီတွယ်ဖို့ ကြံထားသည်..။ ယခုမူ မထင်မှတ်ပဲ အပေါက်ချော်ကာ သူ့လီးက ဆရာမလေးစတယ်လာ၏ ဖင်ပေါက်ထဲသို့ ဝင်သွားခဲ့လေပြီ..။ ဝင်တာကလည်း လီးတစ်ချောင်းလုံး နီးပါးလောက်ပင်..။ စတယ်လာ၏ စောက်ပတ်ကိုသာ လိုးဖို့ဖြစ်သော်လည်း သည်အခြေအနေသို့ ရောက်တော့မှ စိုးခိုင်အနေဖြင့် ဆရာမလေးစတယ်လာ၏ ဖင်ပေါက်ထဲမှ လီးကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့ကလည်း မဖြစ်တော့ပါ..။ ထို့ကြောင့် အပေါက်ချော်ကာ မှားထိုးသွင်းလိုက်သည့်တိုင် ဖင်လိုးမှုပြည့်စုံပီပြင်သွားအောင်တော့ လုပ်မှဖြစ်တော့မည်..။ မဟုတ်ပါက စတယ်လာမှာ ဖင်လိုးခံရမှု အရသာကို မခံစားနိုင်ပဲ၊ နာတာကိုသာ သိလျက် ဖင်ခံရမှာ အရမ်းကြောက်ကာသွားနိုင်သည်..။
ထို့ကြောင့် စတယ်လာကို ဖင်ဇိမ်ခံတတ်ကာ ဖင်လိုးခံရမှုကို စွဲစွဲမက်မက်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ရမည်..။ ဒါမှ စတယ်လာကို ရေရှည် ဖင်ဆက်လိုး၍ ရနိုင်သလို သူအလိုးချင်ဆုံးဖြစ်သော ဆရာမလေး အိုင်ရင်းကို ဖင်လိုးရဖို့လည်း အခွင့်အရေးတွေ ချောမောလာမည်..။ စတယ်လာ ဖင်လိုးခံပြီး အရသာအပြတ်တွေ့တာကို အိုင်ရင်းမြင်ကာ ဖင်ခံချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာအောင်လည်း လုပ်ပေး၇မည်..။ “ ပန်းအိ…ဆရာမလေးရဲ့ စောက်ပတ်ကို အပီရက်ပေးလိုက်..။ သူ ဖင်ကောင်းကောင်း ဇိမ်ခံတတ်အောင် ဦးက လိုးပေးမလို့…” စိုးခိုင်က ပန်းအိဖြူကို လှမ်းပြောသည်..။ “ ဟာ…အဲဒါ မလုပ်ပါနဲ့တော့ ရှင်… အရမ်းနာနေတယ်…၊ တော်ပါတော့…ပြန်ထုတ်ပါ…ကျမ မခံဘူး..ဖယ်… ဖယ်ပါ…” မိမိကို ဖင် အပီလိုးတော့မည်ဟု စိုးခိုင်ပြောလိုက်သော စကားကြောင့် ဆရာမလေးစတယ်လာမှာ ပို၍ကြောက်လန့်ကာ အတင်းပင် ရုန်းထွက်သည်..။ သည်အချိန်တွင် အလွတ်ပေးလိုက်လို့ မဖြစ်ကြောင်း နားလည်သော စိုးခိုင်က ဆရာမလေး၏ ခါးကို အတင်းပင်ချုပ်ကိုင်ဆွဲထားကာ ခါး ဆတ်ခနဲကော့၍ ဖိထိုးသွင်းချလိုက်ရာ အပြင်တွင်ကျန်နေသေးသော နှစ်လက်မလည်း ဖင်ပေါက်ထဲ တစ်၍ မြုပ်ဝင်သွားလေတော့သည်..။ “ အောင်မလေးလေး…နာလိုက်တာ…ဖင်ကွဲသွားပြီ ထင်ပါရဲ့…၊ဖယ်..ဖယ်လို့ဆို… သေပါပြီ…နာတယ်… နာတယ်….” “ ဖင်မကွဲနိုင်ပါဘူး ဆရာမလေးရဲ့..၊ ဖင်ထဲ လီးသွင်းတာလောက်နဲ့တော့ ဖင်ကွဲမထွက်ပါဘူး…” “ အို…မသိဘူး….အရမ်းနာနေတာ…ပြန်ထုတ်ပါ ရှင်…သနားပါအုန်း…” “ လီးသွင်းကာစမို့ နာနေတာပါ… ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ရင် ဆရာမလေး အပြတ်ကို အရသာ တွေ့လာမှာပါ…” “ ဟာ..ဆောင့်အုံးမလို့လား…ရှင်…မလုပ်ပါနဲ့တော့…၊ ဟို…ဟို သွင်းပြီးပြီ မဟုတ်လား..၊ ဒါနဲ့ ကျေနပ်ပါတော့နော်…တောင်းပန်ပါတယ်….အို…အမေ့…ဟင့်..ဟင့် အားပါးပါး…” နောက်ဆုံး အသံများမှာ ပန်းအိဖြူက သူမစောက်ပတ်ကို ကုန်း၍ လျှာနှင့် ထိုးရက်ပေးလိုက်မှုကြောင့် ဆရာမလေးစတယ်လာတစ်ယောက် တုန်တခိုက်ခိုက် ဖြစ်လျက် မြည်တမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။ စိုးခိုင်က လီးကို ဒစ်အရင်းပိုင်းမှ အရစ်ပေါ်လာသည်အထိ ဆွဲထုတ်ကာ အားအနည်းငယ်ထည့်၍ ဆတ်ကနဲ ပြန်ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်..။
“ အောင်မယ်လေး…နာလိုက်တာ… ကြမ်းလှချည်လား ရှင်…သေပါပြီ…” အားအနည်းငယ်ပါသော ဆောင့်လိုးလိုက်ချက်ကြောင့် စအိုကျိန်းစပ်ကာ ဖင်ခေါင်းထဲ အောင့်သည်..။ ဖီလင်တက်ကာ မှိန်း၍နေသော ဆရာမလေးလည်း ခေါင်းမော့ခါးကော့၍ ရေရွတ်သည်..။ ညည်းတွားသည်..။ ထိုအချိန်တွင် ပန်းအိဖြူသည် လျှာနှင့် စောက်စေ့ကို ထိုးကလော်၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရက်ပေးသည်.။ လက်ခလယ်နှင့် လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းပူးလျက် စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ထိုးသွင်းပြန်ထုတ် ခပ်သွက်သွက် လုပ်ပေးသည်..။ ဆရာမလေး စတယ်လာအဖို့ ဖင်ပေါက်ထဲ လီးချောင်းကြီး ခပ်ဆတ်ဆတ် ဆောင့်လိုးချလိုက်၍ နာကျင်မှုဝေဒနာ နှင့်အတူ စောက်စေ့ရက်၊ စောက်ပတ်နှိုက် လုပ်ပေးမှုတို့၏ အသည်းအေးရင်ဖိုဖွယ်ရာ အရသာကို တစ်ပြိုင်တည်း ခံစားရသည်..။ အရသာနှင့် ဝေဒနာတို့ ရောနှောသွားသည်..။ အလွန်ပင် ထူးခြားလှသော နာကျင်မှုရောပြွန်းသည့် ဖင်လိုးခံမှု ဖီလင်ကို အမျိုးသမီး စတင်ခံစားရသည်..။ ထိုဖီလင်အရသာကြောင့် တင်ပါးကြီးသည် အလိုလိုပင် ကော့၍တက်လာသည်..။ စတယ်လာကိုယ်တိုင်မှာတော့ သည်လိုဖင်ကော့ ပင့်တင်ပေးလိုက်မှုကို မသိလိုက်ပါ..။ စိုးခိုင်ကမူ အမျိုးသမီ ဖင်ဇိမ်ခံတတ်စပြုပြီကို နားလည်သည်..။
ထို့ကြောင့် ဖင်ပေါက်ထဲ အဆုံးပင် ဆောင့်လိုးသွင်းထည့်လိုက်သော လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြန်သွင်း နှင့် တစ်ချက်ချင်း ခပ်ဖြည်းဖြည်း ခပ်မှန်မှန် ဆက်၍ဆောင့်သည်..။ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း စတယ်လာ၏ ဖင်ကြီး ကော့ကော့တက်သည်..။ ဖင်ကော့ပေးလိုက်မှုကြောင့် လီးသည် ဖင်ပေါက်ထဲ ပို၍နစ်ဝင်သည်..။ နာလည်း ပိုနာသည်..။ သို့သော် ထူးဆန်းစွာပင် ထိုနာကျင်မှုသည် ဆရာမလေးစတယ်လာအတွက် ထူးခြားသော ကာမအရသာ ဖြစ်၍လာသည်..။ ဆရာမလေးသည် နာ၍ မအော်တော့..။ ကောင်း၍မြည်တမ်းမှုများသာ ပါးစပ်မှ ပေါ်ထွက်သည်..။ စိုးခိုင်က အဆောင့် အညှောင့် အသာရပ်သည်..။ လီးကိုလည်း ဖင်ထဲ ဝင်ရုံလောက်သာ ထိုးစိမ်ထားသည်..။ ကိုယ်ကိုအသာကိုင်းချထားကာ ဆရာမလေး၏ နို့ကြီးတွေကို ဆွဲသည်..။ နို့သီးများကို ပွတ်ချေသည်..။ ဖင်လိုးခံရမှု အရသာကို တုန်ခိုက်အောင် ခံစားနေရလေပြီဖြစ်သော စတယ်လာမှာ အရမ်းကို ဟော့လို့နေပါပြီ..။ သူမ၏ ဖင်ကို ဆောင့်လိုးပေးနေမှု ရပ်သလိုဖြစ်သွားရာ ဆရာမလေးမှာ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့..။ ဖင်လည် အပြတ်ကို ယားလို့လာပြီကိုး..။ “ အို…ဟင့်ဟင့်….ဆောင့်လေ လို့…၊ ဘာဖြစ်လို့ ရပ်လိုက်ရတာလဲ..၊ ဆောင့်စမ်းပါရှင့်.. ကျမဖင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးပေးစမ်းပါ….” တဏှာရမ္မက် အလွန်ပြင်းထန်လျက် ကာမအရသာ အ၇မ်းတွေ့သော မိန်းမတွေ ဖြစ်မြဲအတိုင်း ဆရာမလေး စတယ်လာသည် မရှက်နိုင် မကြောက်နိုင် သိက္ခာတွေ ဘာတွေပင် မထိန်းနိုင်တော့..။ မိမိ၏ တရားဝင်လင်လည်း မဟုတ်၊ ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် ရည်းစားလည်း မဟုတ်၊ မြင်ဖူးရုံသာ ရှိသည့် သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်အား မိမိကို ဖင်အပီလိုးပေးရန် အာသာငမ်းငမ်း ရမ္မက်ဇောထန်ထန်နှင့် ထုတ်ပြောလေတော့သည်..။ စတယ်လာကို ဖင်လိုးမှု အဆင်ပြေ ချောမောသွားခဲ့လေပြီမို့ စိုးခိုင်လည်း အတော်ကို သဘောကျသွားသည်..။
ပန်းအိဖြူမှာလည်း သည်လိုဖြစ်သွားစေရန် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အတွက် အရမ်းကျေနပ်သည်..။ အခြားမိန်းမသားတစ်ယောက်ကို သည်လိုမျိုး အရှက်အကြောက်ကင်းစွာ အငမ်းမရ ဖြစ်လာသည်အထိ လုပ်ပေးနိုင်မှုသည် ချာတိတ်မလေး၏ ကာမစိတ်ကိုလည်း ဟုန်းဟုန်းထစေသည်..။ ပြီးတော့ ပန်းအိဖြူသည် မိန်းမချင်း အဖုတ်ရက် ကလိပလူးပေးရမှုများတွင်လည်း ဖီလင်တွေ့ အရသာခံတတ်နေပြီမို့ စိတ်ထထနှင့် စတယ်လာ၏ စောက်ပတ်ကို အပီရက်၊ အပီထိုးကလိ ပစ်လိုက်သည်..။ စိုးခိုင်ကလည်း အားရပါးရပင် ဆရာမလေး စတယ်လာ၏ ဖင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးသည်..။ နို့ကြီးတွေကိုလည်း အားမနာတမ်းပင် ဆွဲညှစ်သည်..။ စတယ်လာအဖို့လည်း ကြမ်းရှရှ ထန်းပြင်းသော အ၇သာထူးကို မိန်းမူးအောင် ခံစားရလျက် ကြမ်းတမ်းအားပြင်းသော ဖင်ဆောင့်လိုးချက်များကို အားရပါးရပင် ခံယူနေလေတော့သည်..။
“ ဘွပ်…ဘု ဘု…ဘွပ်…ဖွတ်…အားပါးပါး..ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ…ဆောင့်ပါ…ဆောင့်ပါ ၊ အား…အာ့… အိ…..ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ပေးစမ်းပါ…ဟုတ်ပြီ…အား..အ..အား…” ဆရာမလေးစတယ်လာ၏ ပါးစပ်မှလည်း အသံတွေ မျိုးစုံ ပေါ်ထွက်ပြောဆိုလို့ လာပါပြီ။ “ ဘယ်လိုလဲ..ဆရာမလေး..ဖင်လိုးခံရတာ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား..ဟင်..” “ ကောင်းတယ် … ကောင်းတယ်.. ကောင်းလို့ ဆောင့်လိုးခိုင်းတာပေါ့…တအားဆောင့်ပေး… ဆောင့် … ဆောင့် ဆောင့်ပေးစမ်းပါရှင်… အား….အား…အီး…” “ ဆောင့်လိုးတော့ ဘယ်လိုနေလဲ…” “ ဘွပ်….အာ့..အိ…ကျမဖင်ပေါက်ထဲမှာ အု….အိုး….လီးကြီး ပြည့်သိပ်ပြီး ..ဘွပ်..ဘု…အမေ့…ဟင့်… အ၇မ်းကို ကောင်းတာပေါ့…ဘွပ်…ဘု ဘု…ဘွပ်..” “ နို့ကြီးတွေ ဆွဲပြီး ဆောင့်ပေးတာ ကြိုက်လား..” “ အင်း…ကြိုက်တယ်…ကြိုက်တယ်..ဆွဲပါရှင့်…ကျမ နို့တွေကို တအားဆွဲစမ်းပါ.. ဆောင့်လည်း တအားဆောင့်…ရှင်သဘောရှိ လုပ်ပါ… အား…ဟုတ်ပြီ…ကောင်း …ကောင်း လိုက်တာ…..အိ…ရီး….အား….” အိပ်ခန်းတံခါးဝတွင် ရပ်ကျန်နေခဲ့လေသော ဆရာမလေး အိုင်ရင်းမှာ သူမ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စတယ်လာ ဖင်လိုးခံ နေရပုံကို အသည်းတုန်အူတုန် ခမန်းပင် ကြည့်မြင်နေခဲ့ရသည်..။ စစချင်းတော့ ကြောက်သလို ဖြစ်သည်.။
ဖင်ထဲ လီးချောင်းကြီး ထိုးသွင်းမှုဒဏ်ကို မချိမဆန့်ခံနေရသော စတယ်လာကို ကြည့်ရင်း မိမိကိုယ်တိုင် ဖင်ခံနေရသလို စအိုဝ ကျိန်းတိန်းတိန်း ဖြစ်သည်.။ ထို့ပြင် လီးကြီး မိမိစောက်ပတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုးခဲ့စက မိမိလည်း အရမ်းနာခဲ့ရပုံကို ပြန်တွေးမိသည်..။ စောက်ပတ်ထဲ သွင်းတာတောင် နာခဲ့ရသော ထိုလီးကြီး ဖင်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ အထည့်ခံရသောအခါ မည်မျှလောက် နာမည်ကို စာနာကာ တွေးမိသည်..။ ထိုနည်းတူ စောက်ပတ်ထဲ လီးအဆုံးဝင်အောင် ထိုးသွင်းပြီးနောက် လိုးဆောင့်ပေးသည့်အခါ မိမိမှာ နာတာတွေမေ့၍ မကြုံဖူးသော ကာမအရသာကို ထပ်ခံစားခဲ့ရသည်ကို ဆက်တွေးမိရာ ဖင်ထဲ လီးတစ်ချောင်းလုံး အဆုံးဝင်အောင် ထိုးသွင်းပြီး ဖင်ကို ဆောင့်လိုးပေးလာလျှင် စတယ်လာ အရသာတွေ့မှာလား ဟုလည်း သိချင်လာသည်..။ ရင် ဒိတ်ဒိတ် ခုန်ရင်း ဆက်ကြည့်နေမိသည်..။ မကြာပါ..၊ စတယ်လာ တစ်ယောက် ဖီလင်တက်ကာ အရမ်းဟော့လာသည်ကို အိုင်ရင်း မြင်တွေ့ရလေတော့သည်..။
အိုင်ရင်းမှာ ယုံပင် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်နေရသည်..။ သူမ၏ ဖင်ဝမှလည်း ယားသလိုလို ဖြစ်လာသည်.။ စောက်ပတ်ထဲတွင်လည်း ပွစိပွစိ လှုပ်ရှားလို့လာသည်..။ စတယ်လာတစ်ယောက် ဖင်ခံရသည်သာမက ပန်းအိဖြူ၏ စောက်ပတ်ရက်ပေးမှုကိုပါ အပီခံရလျက် အရမ်းဖြစ်နေပုံကို ကြည့်ရင်း အိုင်ရင်းလည်း ကာမယမ်းအိုး ပေါက်ကွဲသည်..။ စောက်ပတ်ကို လက်နှင့် ကိုင်ပွတ်ထိုးကလိသည်..။ စအိုကိုလည်း လှမ်းနှိုက်မိသည်.။ လက်တို့နှင့် အားမရနိုင်သောအခါ ဆလင်းဘက်အိတ်ထဲမှ ခရမ်းညိုသီး တစ်လုံးကို အမြန်ထုတ်ယူကာ စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းကလိသည်..။ ဖင်ဝက ပိုယားလာရာ ကျန်ခရမ်းသီးကိုပါ ထုတ်၍ စအိုပေါက်ကို ထိုးကလိသည်..။ စောက်ပတ်နှင့် ဖင်ပေါက်တို့ကို ခရမ်းသီးတစ်လုံးစီ ပြိုင်တူ ထိုးထည့်ကာ အပြတ်ကို အရသာယူသည်..။ အိပ်ခန်းထဲရှိ ဖင်လိုးခန်းကလည်း ကြမ်းသည်ထက် ကြမ်းလာသည်..။ စိုးခိုင်က အပြတ်တွယ်နေသလို ပန်းအိဖြူကလည်း အပီရက်သည်.။ စတယ်လာကလည်း ရက်ရက်ရောရောကို ခံသည်..။ ကြည့်မြင်နေရသော အိုင်ရင်း ပိုဖီလင်တက်သည်.။ ခရမ်းည်ိုသီးလောက်နှင့် မကျေနပ်နိုင်တော့..။ စိုးခိုင်၏ လီးကြီးကို တမ်းတလာသည်..။ ထိုလီးကြီးနှင့် လိုးတာကို ခံချင်လာသည်..။ ရမ္မက်ထန်ပြင်းလာသော မိန်းမများသည် ဘာကိုမျှ ထောက်ထားစဉ်းစားမှု မရှိတတ်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆရာမလေး အိုင်ရင်းတစ်ယောက်လည်း ထိုးကလိနေသော ခရမ်းညိုသီးများကို ဖယ်ထုတ်ကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ အမြန်ပင် လျှောက်လှမ်းဝင်သွားလေတော့သည်..။ကိုစိုးခိုင်ရယ်…ကျမကိုလည်း လိုးပေးပါအုန်း…ကျမ သိပ်ယားနေပြီ… အရမ်း ခံချင်နေပြီ..လိုးပေးပါနော်…” ပြီးးး
ရှေ့နေမလေးနဲ့ ရှေ့သွားနောက်လိုက် အမှု